Miverina ao amin’ny Fahitalavitra Rosiana ny Fanalàna Ara-politika, Tsy Nombàna na iza na Iza · Global Voices teny Malagasy
Miverina ao amin'ny Fahitalavitra Rosiana ny Fanalàna Ara-politika, Tsy Nombàna na iza na Iza
Voadika ny 01 Desambra 2016 2:00 GMT
Sary: Dmitry Smirnov / Twitter
Olo-malazan'ny fampihomehezana tao amin'ny fahitalavitra Rosiana tamin'ity herinandro ity ilay Tchétchène mpanao jadona. Ramzan Kadyrov, izay nampangaina maneran-tany tamin'ireo heloka bevava tamin'ny zon'olombelona ny fitondràny. Na mety hoe, nanaitra sy nampiala voly olona an-tapitrisany ny fanaovan'ilay mpanao hatsikana Mikhail Galustyan an'i Kadyrov ka nanokana ny olona tamin'ity faran'ny herinandro ity mba hijery ny Faha-55 taonan'ny klioba “KVN” mpanao hatsikana ao Rosia .
Zavatra ahitan-doza any Rosia ny fandrabirabiana ara-politika, raha toa ny fandrabirabiana farany tsy misy fiafarany natao tao amin'ny fandaharana fahitalavitra, hita be ho toy ny “Kukly” (Saribakoly ahetsika) fampisehoana tao amin'ny fahitalavitra, izay nesorina tsy nahazo nalefa intsony, efa ho maherin'ny 14 taona lasa izay, fony ny tao Kremlin nolazaina ho leo ny fanarabiana azy ankarihary loatra.
Tiana toy ny “The Daily Show” (Fampisehoana Isan'andro) any Etazonia ny Kukly — fampitahàna izay samy hakàn'izy roa ireo ny zavamisy hoe ireo olona fanta-bahoaka no aseho, saingy tsy mahavita mampiomana anao amin'ireo saribakoly manintona izay niaina tao anatin'i Kukly, ary ireo tantara mahatsikaiky tsy natoraly nampiasain'ireo mpanoratra ho entina manadrohadro an'i Boris Yeltsin, ary taty aoriana i Vladimir Poutine.
Taona maro taorian'ny nahapotika an'i Kukly, hita ho toa miverina tsimoramora ny hadrohadro politika Rosiana. Ny voalohandohan'ny taona 2010, talohan'ny nanambaran'i Dmitry Medvedev hoe hiala amin'ny fitondràna izy mba hahafahan'i Vladimir Poutine miverina, toy ny hoe an-dalam-piovàna ny atmosfera, hoy ny nosoratan'i Ellen Barry tamin'izany. Tamin'ny fahatairan'ny maro, nandefa ny ampahan'ny manokana amin'ny hira manadrohadro ny Filoha Medvedev sy ny Praiminisitra Poutine ny Channel One, fantsom-pahitalavitra vatsian'ny fanjakana vola, ny Andro Voalohan'ny Taona ny taona 2010.
Maivana ilay hadrohadro, raha tsy hiteny hoe tsy naninona mihitsy. Sarimiaina kelin'i Medvedev sy Poutine nandihy teo amin'ny Red Square, milalao zava-maneno sy manetsiketsika ireo vodin-tsigarany, sady mihira hira natokana ho an'ireo mpifanandrina amin'i Kremlin, toy ny Trano Fotsy, ny fitondràna Viktor Yushchenko any Okraina, ary ireo hafa sasany. Niverina mihitsy niaraka tamin'ny zavatra hafa indray aza ireo roa ireo ny taona manaraka, lasa toa zavatra fahita isaky ny fotoana voafaritra, raha tsy hoe somary maimaina, tao amin'ny fampisehoana fahitalavitra Rosiana izay manao fampihomehezana “tsy ahitàn-doza” mitovitovy aminy ho entina manala baràka ireo fahavalo ara-paritra sy ara-politikan'i Maosko.
Tsy naharitra nihoatra ny taona 2013, taona taorian'ny niverenan'i Poutine ho lehiben'ny mpifehy, ilay sarimiaina izay nampiseho antsika dihy, ireo mpampiara-peon'i Kremlin, niaraka tamin’ny fandaharana fahitalavitra malaza iray hafa antsoina hoe “Prozhektorperiskhilton,” izay noforonina ihany koa mba hihanihaniana momba ireo zava-miseho ankehitriny.
Tao anatin'ny fe-potoana fahatelo naha-filoha an'i Poutine, nahita fiovàna maro nahagaga i Rosia, tao anatiny sy tany ivelany. Lasa nahatonga famoretana ara-politika tao anatiny ny fahalalahana teo ambany fahefan'i Medvedev, ary nampiova ny fomba fijerin'ny maro ny sarintanin'izao tontolo izao ihany koa ny fahavononana vaovaon'i Maosko hanohana ara-tafika any ivelan'ny sisintaniny.
Miaraka tamin'ny fahataperana sy fifaranan'ireo fifidianana parlemantera ny volana Septambra tao Rosia, lasa mirona any amin'ny taona 2018 izao ny resaka politika ao amin'ny firenena, raha vinavinaina hirotsaka hikatsaka fepotoana fahefatra ao amin'ny birao i Vladimir Poutine, manokatra ny làlana ho an'ny enin-taona hafa eo amin'ny fahefana indray — manitatra ny fepotoanany maha-filoha azy ho hatramin'ny taona 2024, rehefa ho feno 72 taona i Poutine.
Manoloana ny fiandrandran'ny olona iray mpanao politika tsy manaiky mangina fa mikatsaka fanjakana mandritry ny 25 taona, gaga tokoa ireo Rosiana tamin'ity faran'ny herinandro ity, nahita ilay mpanao hatsikana, Mikhail Galustyan, tao amin'ny fahitalavitra, naka tàhaka an'i Ramzan Kadyrov, ilay mpanao jadona mahery setran'i Tsetsenia. Nanao akanjo toa an'i Kadyrov, mimonomonona tamin'ny feo Tsetsenina, ary nandehandeha teo an-tsehatra, tena nahavita asa tsara mihitsy i Galustyan mody nanao ilay mpitondra an'i Tsetsenia.
Ary, izany eo ihany, anisan'ireo mpijery tao ny Filoha Vladimir Poutine, nihomehy tamim-pahalalam-pomba.
“Я сразу говорил, что победит Трамп”: Путин и “Кадыров” на юбилее КВН pic.twitter.com/y0NNO9U1Uv
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 27, 2016
“Tonga dia niteny aho fa haharesy i Trump.” Poutine sy “Kadyrov” tao amin'ny fankalazana ny tsingerintaonan'ny KVN. ~Dmitry Smirnov
Toy ireo hanihany niseho tamin'ny fahitalavitra Rosiana hatramin'ny naneken'i Kremlin ny hanihany tena izy tamin'ny voalohandohan'ny taona 2000, tsy dia mahery loatra amin'ny ankapobeny ny zavatra nataon'i Galustyan.
Ny fotoana tena nitapy indrindra tamin'ilay fampisehoana dia mety hoe tamin'i Kadyrov nolalaovin'i Galustyan, taminà fihetsika mahery, namafa ny tanany tamin'ny patalohany nialoha ny nanohizany ny fiarahabàna ireo mpijery ny fampisehoana. Toa natao hilazàna ilay hanihany hoe lehilahy tsy mahalala fomba fiaina tsara loatra i Kadyrov, hoe ahiahiana ho maloto noho ny asany ireo tànany, amin'ny fotoana rehetra. Raha aseho amin'ny lafiny hafa indray anefa, mety entina milaza hoe maloto amin'ny heviny mahitsihitsy kokoa ireo tànan'i Kadyrov. (Hita ho tia kokoa io heviny iray io, farahafaratsiny, ilay mpanoratra lahatsoratra Oleg Kashin.)
Tsy niafara tamin'ny fandefasana tamin'ny fahitalavitra anefa ny tantara. Ny andro taorian'ny nandefasana ny hanihanin'i Galustyan, nilaza tao amin'ny media sosialy i Ramzan Kadyrov, izy tenany mihitsy, hoe nanampy an'ilay mpanao hatsikana nikarakara ny hatsikany izy, lazainy ho in-droa niaraka nanao famerenana taminy izy, ary nanome an'i Galustyan ireo akanjo nanaovany teny an-tsehatra. “Tsara ny zavatra rehetra, niaraka tamin'ilay feony,” hoy i Kadyrov nanazava tao amin'ny Vkontakte. “Goavana izy amin'io. Nolazaiko izy mba tsy hataony sarotra loatra amin'ireo mpijery ny hamantatra hoe iza no tahafiny!”
Taorian'ny nandefasan'ny Channel One ny lahatsarin'ny fampisehoan'i Galustyan nilalao an'i Kadyrov, nanoratra ireo mpampiasa media sosialy sasany hoe manahy ny amin'ny ain'ilay mpanao hatsikana izy ireo, nilaza fa mety hanao valifaty amin'iny ny mpitondra an'i Tsetsenia.
Hita ho tsy naninona anefa i Galustyan. Ary hita ho faly i Ramzan Kadyrov.
Belarosia 7 ora izay